Laba Wasiir Oo Ka Tirsan Xukuumadda Madaxweyne Biixi Oo Shaaciyay In Ay Qabaan COVID-19 | #1Araweelo News Network
Hargeysa(ANN)-Laba xubnood oo ka mid ah Golaha Wasiirarada Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi, ayaa shaaciyay in ay isku arkeen xannuunka Cuddurka COVID-19, kuwaas oo baraha Bulshada kula wadaagay natiijada baadhitaano ay sameeyeen, kadib markii ay isku arkeen astaamaha xannuunka.
Bidix : Maxamed Axmed Cawed oo ah Wasiirka Maalgeshiga Somaliland iyo Midig Wasiirka Wasaaradda Boosaha iyo Isgaadhiinta Dr Cabdiweli Suufi, Araweelo News Network 2 Jun 2020.
Maxamed Axmed Cawed oo ah Wasiirka Maalgeshiga Somaliland, ayaa bartiisa Twitter-ka xalay ku shaaciyay in baadhitaan lagu sameeyay natiijada kasoo baxday loogu xaqiijiyay inuu qabo xanuunka Coronavirus, balse wuxuu sheegay in xaaladdiisa caafimaad ay aad u wanaagsantahay.
Waxaan sameeyey Baadhitaanka caabuqa Covid19, jawaabtuna positive bay noqotay Xaaladayduna way fiican tahay. Wax xanuun ah oo aan dareemaya ma jirto #Somaliland #COVID19
— Mohamed Ahmed (Awad) (@CAWADAYN) June 1, 2020
Wasiir Cawed, ayaa maalmo ka hor wax ka yar laba todobaad ka qaybagalay xidhitaankii iyo abaalmarintii program kii tartanka adeega bulshada ee Ardayda jaamacadaha ee Ramadan ee ay qabteen Premierbank.
Waa xidhitaankii iyo abaalmarintii program kii tartanka adeega bulshada ee ardayda jaamacadaha ee Ramadan ta ka baxayey Tv yada dalka. #Somaliland #premierbank pic.twitter.com/WfrXjkJAW9
— Mohamed Ahmed (Awad) (@CAWADAYN) May 22, 2020
Sidoo kale,Wasiirka Wasaaradda Boosaha iyo Isgaadhiinta Dr Cabdiweli Suufi, ayaa dhankiisa warbaahinta qaarkeed u xaqiijiyay in baadhitaan uu sameeyay natiijada kasoo baxday ay noqotay in uu qabo xannuunka COVID-19, walaw uu xusay in xaaladdiisa caafimaad ay fiicantahay.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye oo warbixinaha uu maalib walba la wadaago warbaahinta ee xannuunka Coronavirus mar uu maanta shaacinayay tirada cusub ee xannuunka laga helay, ayaa la weydiiyay in ay jiraan xubno ka tirsan golaha Wasiirada oo laga helay xannuunka, balse Agaasimaha ayaa sheegay in aannay xaq u lahayn in sheegaan hebelo laga helay xannuunka oo aannay ku jiirin anshaxa, waxa keliya ay shaaciyaan ay tahay tirada xannuunku marayo. Sidaa awgeed aannu la socon arrintaa.
Labada xubnood ee golaha Wasiirada Xukuumadda, ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay ee iskood u shaaciyay natiijada baadhitaan ay isku sameeyeen, balse Wasaaraddaha ay masuulka ka ahaayeen ayaan lagu arkin weli baadhitaan iyo daba-gal ay wasaaradda Caafimaadku samaysay oo lagu xaqiijinayo in ay shaqaalaha iyo dadkii ay la kulmeen ee Bulshada kale qabaan xannuunka iyo in kale.